Samsung Galaxy S8 cusub ayaa la imaan doonta cusbooneysiinta S Health si ay ula dagaallanto Apple | Wararka IPhone
Samsung waxay rabtaa inaan iska ilowno Galaxy Note 7 iyo qaraxyada sida ugu dhaqsaha badan, sidaas darteed waxay u muuqataa inay diyaarinayaan Samsung Galaxy 8 sida ugu macquulsan ee tartan ah. Waana iyada oo wada jir ah iPhone ay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah aaladaha leh teknolojiyadda ugu casrisan ee aan suuqa ku haysanno. Ma dhihi karno Samsung Galaxy waa xun yihiin qalabka, waa kuwo aad u wanaagsan ficil ahaanna waa heer iPhone ah.
Apple sidoo kale sanadkan way naga yaabi doontaa, ama uguyaraan taasi waa waxa lafilayo, waxaan kujirnaa sanad guuradii tobnaad ee iPhone taasna waa in kabadan sabab aan nooga fiirsanno aaladda xigta ee ragga ka imanaya Cupertino. Intaas oo kaliya maahan, heerka softiweeriga wax badan ayaa sidoo kale laga filayaa ... Hadda, heerka tikniyoolajiyadda, waxa ugu badan ee laga hadlayo waa soo socda Samsung Galaxy 8, tan xigta ee Samsung. A Samsung Galaxy 8 oo sida muuqata keeni doonta astaamo badan oo cusub, iyo haa, waxay sidoo kale doonayaan inay diirada saaraan adduunka caafimaadka. Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay, Samsung waxay qorsheyneysaa cusbooneysiin weyn oo ku saabsan S Health si ay si toos ah ula tartanto Apple's HealthKit ...
Sida la sheegay, cusboonaysiinta xigta ee S Health, xirmada caafimaadka ee Samsung, ayaa ka mid noqon doona magacaabista la-talinta caafimaadka iyo xitaa bixinta khidmadaha caafimaadka. Wax aad u xiiso badan maadaama heer gaar ah ay jiraan caymisyo caafimaad oo fara badan oo bilaabaya codsiyadooda si xiriirka dhakhaatiirteenu u fududahay: la tashiga xogta ballamaha, daawooyinka laguu qoro, dirista sawiro, iyo dirista saameynta aan ku yeelanayno daaweynta.. Waxaas oo dhan oo ay ka mid yihiin biometric iyo xogta waxqabadka ee aan ku darno dalabka. Dabcan, aakhirka, iyadoon loo eegayn inta soo saarayaasha qalabka moobiilku ay bilaabaan adeegyada noocan ah, iyagu waa maamulka iyo shirkadaha caafimaadka kuwaas oo ay tahay inay fuliyaan fursadahaas socodkaaga shaqada, oo leh sir si aad ula mid noqoto xogtan.
Waan arki doonaa waxaas xan oo dhan ay noo hayaan, waxa hubaal ah in Samsung ay jeceshahay inay hesho waxyaabo aad ugu eg waxa Apple bilaabayo Layaab malahan in shirkada weyn ee Jabbaan ay dooneyso inay ka hortagto wiilasha ku jira daarta inta ay awoodaan., iyo gaar ahaan mowduuca caafimaadka oo ah wax ay Apple aad diirada u saartay sanadihii la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung Galaxy S8 cusub ayaa la imaan doonta cusbooneysiin ku saabsan S Health si ay ula dagaallanto Apple
"Galaxyadu waxay ficil ahaan ka yihiin heerka iphone-ka"
Haha heerkiisa xagjirnimada waa mid aan horay loo arag.
Waxaan ka qorayaa iPhone 6s waana inaan dhaho galaxyadu aad ayey uga sarreeyaan wixii iPhone ah, tiknoolajiyad heer sare ah iyo software aad u macquul ah.
Waa hagaag qof walba oo wata qiiradooda, sida xun ee ay u been sheegaan, halkii aad ugu raaxeysan lahayd tiknoolajiyad la'aan xagjirnimo
aan dhicin2 dijo
Dhinaca kale, si fudud uga jawaab in haddii bogga loogu yeero "warka iPhone", waxa macquulka ah waxay noqon doontaa in la helo maqaallo iyo fikrado ka roon Apple marka loo eego tartanka. Gaar ahaan haddii tartankaas ugu yar yahay in Apple wax sheego, waxay durbaba fulinayaan wax "la mid ah" (oo muuji xigashooyinka wax badan, fadlan).
Qofna ma diidi doono Samsung dhammaan horumarka iyo qeexitaannada taleefannadooda iyo waxaad rabto. Laakiin haddii Apple ay sii deyso taleefan madow oo dhalaalaya, Samsung waxay sii deyneysaa taleefan madow oo dhalaalaya; haddii ay Apple ka saarto dekedda dhagaha, Samsung sidoo kale waxay ka saareysaa dekedda headphone-ka ... iyo "waxyoonyo" kale oo badan oo ka yimid Samsung, oo aan lagu xusin xamaasad toos ah oo ay la gasho kooxda ay xifaaltamaan, illaa heer ay si deg deg ah taleefanka ula soo baxdo oo waqtiga ka hor, iyada oo aan dhammeystirka nadiifinta iyo tijaabinta, in la saaro waxyar kadib maxaa yeelay macno ahaan wuu qarxay dabna wuu qabsaday (dhibaatadu waxay ahayd baytariyada, laakiin waa in la xusuusnaado in xilligii ugu dambeeyay Samsung ay beddeshay baytariyadii ku socday qoraalka 7 awood kale oo weyn oo ka sareysa iyadoon waqti la helin si loo xaqiijiyo inay iyagu ahaayeen kuwii ugu fiicnaa, maadaama ay si deg deg ah u go'aansadeen oo ay u ordayaan inay bilaabaan Qoraalka ka hor inta aan la soo bandhigin IPhone-kii ugu dambeeyay iyadoo laga faa'iideysanayo xaqiiqda ah in kuwa ka socda Cupertino aysan wax weyn sameyn doonin. war ku jira).
Ugu dambayntiina, waxaan qabaa fikradda ah in Android-ka ugu fiican uu yahay midka aad doorato lakabka u-habeynta oo aan ahayn soo-saaraha hadba sida aad u kala jeceshahay iyo hiwaayadahaaga: taasna waxaan horay u haysannay Apple oo leh nidaamkeeda deegaanka ee xiran, muhiim maahan in Samsung ay kaalay oo ku soo rogo astaamahaaga, liiskaaga, shaashadahaaga ee toobiyeyaasha iyo ogeysiisyada iyo dejimaha. Xitaa taas, macaamiisha Samsung waa inay wax liqaan: waxay iibsadaan qalab geesinimo leh oo Android ah oo ay ku fekerayaan inay qaadanayaan "xorriyad" waxa kaliya ee ay helaana waa Android lagu rinjiyeeyay oo ah heerka cabbirka dhadhanka Kuuriya iyo in meesha laga saaro Play Store, wax kasta oo la mid ah Google ee kaydka ah ee cagaaran ee Google waa iska dhaca daahsoon. Intee in leeg ayaa laga caban karaa Apple, laakiin inta badan soo saarayaasha Aasiya waxay u qariyaan Android sidan oo kale "iPhonize" aad ayey u badan yihiin, waxaan u maleynayaa haddii hacker uu helo waddo uu ku rido macruufka taleefannadaas sida hackintosh, in badan ayaa sidaas ku iibin lahaa toos ah.
Dhinaca kale, ka faallo in Samsung uusan ahayn Rafaa weyn Jaban laakiin uu yahay mid Kuuriyaan ah.
Apple waxay ku biirtay guddiga cusub ee gaadiidka ee waaxda otomatiga ee Mareykanka.